Kooxda AL Shabab oo sheegtay inay 17 Askari ay ka dishay Amisom. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Kooxda AL Shabab oo sheegtay inay 17 Askari ay ka dishay Amisom.
Kooxda AL Shabab oo sheegtay inay 17 Askari ay ka dishay Amisom.
Afhayeenka Al-Shabaab ee dhinaca howlgalada Shiikh C/casiis Abuu Muscab oo la hadlayey warbaahinta taageerta kooxdaas ayaa waxaa uu sheegay in maalmihii la soo dhaafay ay askar badan oo ka tirsan AMISOM ku laayeen magaalada Kismaayo.
Abuu Muscab ayaa waxaa uu intaa ku daray in 17 askari oo ka tirsan ciidanka dowladaha Siere-leone iyo Kenya ay laayeen ka dib weeraro isugu jira qaraxyo iyo dagaalo ay ku qaadeen qeybo ka mid ah fariisimaha AMISOM ee magaaladaas.
“Weerarkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay shalay markii Mujaahidiintu ay qarxiyeen labo gaari oo kala ahaa booyad iyo Taw ilaalo u ahaa khasaare badan baa halkaas ku gaaray cadowga, shantii maalmood ee la soo dhaafay weeraradii dhacay waxay mujaahidiintu ku dileen 17 ka tirsan AMISOM oo 15 ay Kenya yihiin 2 kalena ay u dhasheen Siere-leone” ayuu intaa ku daray Abuu Muscab.
Afhayeenka Al-shabaab ayaa sheegay in sababta ay u weerarayaan ciidamada Kenya iyo Itoobiya ay tahay iyagoo doonaya ayuu yiri iney qaataan dhulka ay leeyihiin dadla Soomaaliyeed ee muslimiinta ah, si ay ugu darsadaan dhulal Soomaaliyed oo ay horey u heysteen, isagoo xusay iney dagaalka sii wadi doonaan illaa ay dalka ka saaraan.
Sidoo kale War-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in shan ruux oo sadex ka mid ah yihiin ciidamada Kenya ay ku dhaawacmeen qarax shalay lagula eegtay xaafada Via-afmadow ee magaalada Kismaayo, iyagoo intaa ku daray in weerarada noocan ah aysan wax u dhimi doonin howlgaladooda.
Previous articleTop secret: the corruptions about igathah agency and director general “Karram” for his admistrations.
Next articleRag lagu tuhmayo inay ka dambeyen dilka Guddoomiye ku xigeenkii Yaaqshiid oo Gacanta lagu soo dhigay.